सामाजिक सञ्जालको गञ्जागोलमा झुन्डिने बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
सामाजिक सञ्जालको गञ्जागोलमा झुन्डिने बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?
बालबालिकाले प्रयोग गर्ने एप्सको पासवर्ड आफै सेयर गर्ने, त्यसमा कसरी गोप्यता कायम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुझ्ने, अभिभावक आफै मोडरेटर बन्ने जस्ता निगरानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित तरिकाले गर्ने प्रयोगबारे थाहा नभएका व्यक्तिले तालिम लिनुपर्ने कुरामा क्लार्कले जोड दिएकी छन् । अहिले धेरै प्रयोग गरिने एप्लिकेशनहरु जस्तै :- फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, स्न्यापच्याट, ह्वाट्स एपमा विशेष निगरानी गर्न आवश्यक रहेको उनको मत छ । किनभने यस्ता एप्लिकेशनबाट हुने गतिविधिले असुरक्षित अवस्था सिर्जना गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । -सीएनएन
धरानमा बालमैत्री स्थानीय शासनले ल्यायो परिवर्तन
बालबालिकालाई स्कुल जाऔं, जाऔं बनाउन सकिन्छ !